Ankehitriny ny olona, indrindra fa ireo mponina an-tapitrisany megacities, matetika acutely irery. Toa paradoxical, saingy ny tanàna ireo mponina fotsiny no mitandrina ny tenany isan’andro manao ny mahazatra ny andraikiny. Mba hahazoana vaovao mahaliana ny olom-pantatra manelingelina ny tena ahiahy, tahotra ny ho diso fandray. Amin’ny toe-javatra ity, tahaka ny amin’ny mandrakariva, dia ny hita amin’ny Aterineto.
Teo anivony sy tena tsara vintana mandritra ny segondra vitsy mba hivory hiaraka mahaliana ny olona sy ny tahaka ny-tsaina ny olona ny miaina, tsy eo amin’ny firenena ihany fa eo amin’ny firenena mifanolo-bodirindrina. Ny mora indrindra ary indrindra takatry ny fomba hamatotra miaraka ho an’ny manirery olona ny lahatsary chats. Analogue amin’ny chat roulette dia iray amin’ny malaza indrindra rosiana chat room ao amin’ny Internet.
Manomboka mifampiresaka vahiny aza tsy maintsy misoratra anarana — tsindrio fotsiny ny bokotra»manomboka».
Ny interlocutor eto dia afaka mahita saika avy hatrany
Raha ara-tsosialy ny haino aman-jery namana maintsy atao pirinty isaky ny hafatra amin’ny Chat-roulette mitranga eo amin’ny masony. Ianao handre ny feon ny lehilahy izay maro kilometatra miala aminao, ary izany no zava-dehibe kokoa. Chat mampiasa lahatsary manokatra iray manontolo lafiny hafa — rehefa avy rehetra, hiresaka aminareo isaky ny amin’ny olon-kafa. Izany fiokoana mahafinaritra sy mahavariana, samy vaovao amin’ny chat ny vaovao sy ny olom-pantatra, mahaliana ny resaka. Manana vintana ho afa-mizara ny zavatra niainany, ny hevitra sy ny eritreritra.
Rosiana amin’ny chat roulette tsy mbola nisy nahazo lazany noho ny zava-misy fa tsy mitovy amin’ny rehetra ny loharanon-karena hafa ao amin ny lalana. Afa-tsy noho ny tsy fisian’ny fomba fisoratana anarana sy ny saram-ny fampiasana ny mpitsidika toy ny tsotra, hita maso mahafinaritra sy ny mpampiasa-namana interface tsara, tsy ny dokam-barotra, maro ny vonona-to-pifandraisana interlocutors na oviana na oviana ny andro, ny fahafahana tsy nitonona anarana. Raha ny fifanakalozan-dresaka dia toa mankaleo na tsy mahaliana, dia afaka tsy misy fanazavana, tsindrio eo amin’ny»manaraka»bokotra sy any amin’ny manaraka hiresaka. Izany no heverina ho fomba fanao mahazatra, sy ny fandikan-dalàna eo ianao dia tsy misy olona, satria any amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny mpampiasa jereo ny samy hafa noho ny voalohany sy ny fotoana farany teo amin’ny fiainako. Ny lafiny afaka mamoaka ny tsirairay, mizara ny zava-miafina lalina indrindra sy ny zava-miafina feno fahatokiana fa tsy misy olona mianatra